ICatlins Retreat, iOwaka, iKereru Room - I-Airbnb
ICatlins Retreat, iOwaka, iKereru Room
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguJill
Relax kwaye uphakamise iinyawo zakho, uphumle kwindawo yethu yokubuyela kuxolo lweCatlins. I-villa yethu eyimbali isentliziyweni ye-Owaka, iikhefi kunye neevenkile zihamba imizuzu emi-2 kwaye kukuhamba nje okufutshane ukuya elwandle, ukuhamba ematyholweni, iingxangxasi kunye nezinto ezininzi ezinomtsalane ezinokuthi zinikezelwe yiCatlins.
Igumbi leendwendwe ngalinye eliphangaleleyo linokumkanikazi kunye nebhedi eyodwa, igumbi lokuhlambela labucala le-en-suite, kunye nefriji, itafile nezitulo kunye neti nekofu. Isidlo sakusasa esimnandi selizwekazi siyafumaneka njengokhetho olongezelelweyo.
Esi sakhiwo sinembali sakhiwa luluntu ngenjongo yokutsala ugqirha kule ndawo malunga nekhulu leminyaka eyadlulayo. Isiphumo siyindawo entle yomlinganiswa kumbindi we-Owaka, umgama wokuhamba ukuya kuzo zonke iivenkile kunye nezinto eziluncedo. Iindwendwe ziya kuhlala kumagumbi ama-2 amakhulu ngaphambili kwendlu anokubonwa kwifoto.
I-Owaka yidolophu encinci yasemaphandleni eyamkelwa ngokufudumeleyo nayo yonke into oyifunayo. Kukho ivenkile ezi-4 zesikwere, igaraji, i-pub, i-cafe, ivenkile yeencwadi ezisetyenzisiweyo, iivenkile zezipho, ivenkile yezempilo, imyuziyam kunye neziko lolwazi, konke kuhambo olufutshane lweCatlins Retreat.
Ulwandle lwasePounawea kukuhamba ngemizuzu emi-5 kuphela kwaye uninzi lokuhamba ematyholweni, ukuhamba elunxwemeni, iingxangxasi kunye nezilwanyana zasendle zingaphakathi kohambo olufutshane.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Owaka